Fananganana Oniversite ao Antalaha Miandry fankatoavan’ny fanjakana sisa
Tontolon’ny fampianarana Ahiana hisavorovoro indray…
Mbola tsy ampy iray volana akory no nitantanan` ny minisitry ny fanabeazam-pirenena (MEN) vaovao, Sahondrarimalala Marie Michelle, dia efa miseho lany sahady ny tsy fahatokisan` ny mpampianatra sy mpanabe ny mpitondra ankehitriny.
Fanadinana CAP sy CFA 1.559 ireo mpiadina manerana ny nosy
Tontosa soamantsara omaly alatsinainy 14 septambra ny andro voalohany hanatanterahana ny fanadinana hahazoana ny mari-pahaizana Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP) sy ny Certificat de Fin d’Apprentissage (CFA)
Faritra Androy Nomena fitaovam-panadiovana ireo toeram-panadinana
Toeram-panadinana CEPE miisa 34 sy BEPC miisa 15 any amin`ny fari-pihapiadiana miisa 4 amin` ny faritra Androy:
Olana ara-tanin’ireo Oniversite Nanaitra ny fanjakana ny Seces Antananarivo
Eo anatrehan’ny loza nitranga tao Maninday, Oniversiten’ny Toliara ny 10 septambra 2020 ka naha may ireo tranovondro ipetrahan’ny mpianatra dia nivoaka tamin’ny fahanginany ny avy eo anivon’ny sendikan’ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra Antananarivo na Seces Tana.
Maninday Toliara Tranon’ny mpianatra an-jatony may kila forehitra
Nisehoana fahamaizana goavana tao amin’ny toeram-ponenan’ny mpianatra na ny “Campus Universitaire” antsoina hoe Relax ao Maninday Toliara, omaly 10 septambra.
CONAMEPT Manomana ny rehetra amin’ny fiatrehana ny taom-pianarana
Efa enim-bolana lasa izay no tsy niditra an-tsekoly farany ny mpianatra teto amintsika.
Cisco Ambanja Nitotongana hatrany ny voka-panadinana CEPE
Tsy mitsaha-mitotongana ny voka-panadinana CEPE tao amin’ny Cisco Ambanja tato anatin’ny telo taona farany.
Velirano fahaefatra ny fampianarana ary fanambin’ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ihany koa ny hanangana oniversite isam-paritra. Masa-bary maito kitoza ny fanjakana sy ny vahoaka an’Antalaha, hoy i Nasira Julien, solombavam-bahoaka voafidy tao Antalaha, Faritra SAVA.
Nitondra fampahafantarana io olom-boafidy io fa nahita mpamatsy vola vahiny izy ireo, izay vonona hanao tan-tsoroka amin’ny fanorenana fotodrafitrasa manara-penitra ho an’ny oniversite miaraka amin’ny fampitaovana ara-teknôlôjia vaovao ao Antalaha. Efa nampahafantarina izay ny fahefana mpanatanteraka tamin’ny alalan’ny minisitry ny toekarena sy ny vola ary ny tetibola sy ny minisitry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa, hoy i Nasira Julien. Fankatoavana avy amin’ny fanjakana Malagasy sisa andrasana, hoy hatrany ity farany dia miditra amin’ny dingana manaraka ny fiaraha-miasa amin’ny mpamatsy vola sy ny fanatanterahana ny asa, ary mety hiitatra amin’ny fanatsarana ny seranana any Antalaha sy ny famatsiana herinaratra mandeha amin’ny masoandro izany, ka hisitraka ihany koa ny Distrika sivy hafa. Manana loharanon-karena miavaka ihany koa i Antalaha izay malaza amin'ny lavanila.